Wakhti ballanso haddii aad dooneysid inaad soo codsatid dheereeynta ruqsadda deggenaanshada maadaama wali baahi u qabtid difaacid - Migrationsverket
Wakhti ballanso haddii aad dooneysid inaad soo codsatid dheereeynta
ruqsadda deggenaanshada maadaama wali baahi u qabtid difaacid
Boka tid för att lämna in din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov – somaliska
Waxaa hada suurtagal ah in adiga aad wakhti ballan ka suubsankartid Hay’adda socdaalka haddii aad dooneysid inaad soo codsatid dheereeynta ruqsadda deggenaanshada maadaama aad baahi u qabtid difaacid.
Markey wakhtiga rusqadda deggenaanshada ku meel gaarka kaa dhammaato adiga waxaad haysataa fursad aad ku soo codsatid in wakhtiga laguu dheereeyo. Codsiga waa in adiga shaqsiyan keentid xafiiska Hay’adda socdaalka. Adiga codsigaada waxaad soo gudbinkartaa ugu horeyn markey saddex bilood ka harsantahay xilliga ruqsadda deggenaanshada ku egtahay, iyo ugu dambeyn maalinta ruqsadda ku egtahay.
Sidaa adiga wakhtigaada u qorsheysankartid iyo xilliga aad dooneysid booqasho ugu imaankartid Hay’adda socdaalka, adiga waxaad ballansataa wakhti haddii aad dooneysid inaa codsi soo suubsatid. Wakhtiga ballanta adiga waxaad ka suubsan bogga internetka oo Hay’adda socdaalka. Kulankaas wuxuu qaadan 1 saacad iyo bar ilaa 2 saacadood. Waxaa dhicikarto in adiga lagu dhaho sug markii la gaaro toogtaada oo waxaa sabab u noqonkaro in la raadinaayo turjum firaaqo ah. Markii lagu la kulmo adiga waxaad soo gudbin qoraal codsi, waxaa lagaa sawiri faraha iyo wejiga, iyo waxaad wada hadal la yeelan shaqaalaha xafiiska.
Haddii aad tahiin qoys oo dhowr qof ka kooban oo halmar wada dooni in codsi soo gudbiyaan waa in qofkasto wakhti ballan u qaas ah suubsado. Markaa wakhti ka ballansaneysiin bogga internetka oo Hay’adda socdaalka baa ku qoreysiin inta qof aad tahiin oo dooni wakhti ballan.
Magaalooyinka adiga aad codsiga keenikartid waa:
Wakhti ballanso haddii aad dooneysid inaad suubsatid codsiga dheereynta ruqsadda deggenaanshada (kaliya iswiidhish iyo ingiriis)
Inta ka akhriso warbixin ku saabsan dheereynta ruqsadda deggenaanshada oo sabab u tahay baahi u qabtida difaac